Sahanka Baraha Bulshada wuxuu Yiraahdaa: Milkiilayaasha Oo Sii Kordhiya | Martech Zone
Sahanka Baraha Bulshada wuxuu Yiraahdaa: Milkiileyaashu Way Sii Kordhayaan
Jimcaha, Agoosto 19, 2011 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Ball Lorraine
Sida laga soo xigtay Sahaminta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga Yaryar ee 2011, Milkiilayaasha meheradaha ayaa warbaahinta bulshada ka qaadaya si ka culus sidii sanadkii hore. Daraasad la sameeyay laga bilaabo May 1, 2011 - July 1, 2011 waxaan weydiinay 243 milkiilayaasha meheradaha yaryar (shirkadaha leh wax ka yar 50 shaqaale) kuwaas oo u sameynayay waxyaabo akoonadooda baraha bulshada.
Milkiilayaasha ayaa la wareegaya xilka
Jawaabahoodii, waxay u muuqatay milkiileyaashu inay si dhab ah u qaadanayaan warbaahinta bulshada maaddaama in ka badan 65% ay tilmaameen inay si firfircoon uga qayb qaadanayaan abuurista waxyaabaha. Boqolkiiba waxay si cadaalad ah joogto ugu ahayd kooxaha kala duwan ee milkiilayaasha meheradaha yar, illaa aan ka eegno shirkadaha leh in ka badan 25 shaqaale ah.
In kasta oo kaqeybgalkoodu bilaabmayo inuu dhaco, 50% milkiilayaasha shirkadahaan waaweyn wali way kujiraan. Waa iska cadahay, si kastaba ha noqotee, fuliyayaashani waxay u xilsaaranayaan in badan oo mas'uuliyadda ah abuurka warbaahinta bulshada kuwa kale.
Ayaa iska leh abuurista waxyaabaha ku jira baraha bulshada
In kasta oo shirkado badani ay ku qulqulayaan warbaahinta bulshada, barnaamijyadooda ayaa gaabiya maxaa yeelay si cad uma qeexaan doorarka. Waxay ku guuldareystaan ​​inay go'aansadaan cidda abuuri doonta nuxurka, inta jeer iyo waxa ku saabsan.
Waan ka xumahay markaan arko in ka badan ½ shirkadaha daraasadda ku jira oo aan ka faa'iideysanayn macaamiisha iyo rajooyinka inay yihiin soosaarayaal wax ka kooban.
Laga soo bilaabo markhaati furitaan iyo baaris, su'aalaha iyo wadahadalada, shirkadaha waxay luminayaan fursad aad u weyn iyagoo aan si firfircoon uga qayb galin goobahan.
In kasta oo ay ku kala duwan tahay shirkaddu haddana waxaa jira astaamo muujinaya in baraha bulshada si aad ah looga taxaddarayo sannadka 2011. Tusaale ahaan: Tixgeli doorka barayaasha. Daraasaddeenii 2010 ee Facebook, in ka badan 80% ganacsiyada lahaa dad tababar ku qaatay waxay muujiyeen in tababarku ku lug lahaa abuurista baraha bulshada.
Anaga ahaan, tan ayaa tilmaamaysa in shirkadaha xaqiiqda aysan dhab ahaan u qaadanaynin qalabka. Hadday sidaas yeeli lahaayeen, kuma tiirsanaan lahaayeen xubinta ugu khibrad yar ee kooxdooda inay hoggaamiyaan horumarka nuxurka. Daraasaddan sannadkan, kaliya 30% shirkadaha leh layliyo ayaa muujiyay inay ku lug lahaayeen abuurista waxyaabaha.
In kasta oo milkiileyaal badan oo ganacsi ay rumeysan yihiin in baraha bulshada ay tahay wax naftaada u qabta nooca waxqabadka, haddana waxaa jira xiiso sii kordheysa oo la xiriirta shaqaaleynta suuqgeynta iyo shirkadaha warbaahinta bulshada si ay u taageeraan dadaalkooda. Guud ahaan, ku saabsan 10% shirkadaha daraasadda waxay muujiyeen in shirkad ka baxsan ay si firfircoon ugu hawlan tahay barnaamijka warbaahinta bulshada ee shirkadda. In kasta oo aan filayey in shirkadaha waaweyn ay banaanka ka raadsadaan caawimaad, tiro aad u tiro badan oo shirkado ah oo ku kala jira 6-10 qof ayaa sidoo kale fiirinayey ilaha dibadda.
Waxaa la yaab leh, shirkadaha ay ka shaqeeyaan 11 - 24 shaqaalahoodu uma badna inay adeegsadaan shirkad dibadeed. Sababta Waxaan u qaadaneynaa cabirkan, shirkaduhu waxay leeyihiin qof shaqaale ah oo waqti u huraya howlaha warbaahinta bulshada. Sidii la filaayey, shirkadaha ugu waaweyni waxay u badan tahay inay sidoo kale leeyihiin shaqaale u heellan warbaahinta bulshada. Faallooyinka waxay sidoo kale muujinayaan isku dhaca u dhexeeya naftaada iyo xeryaha kireysta.
Maxay milkiilayaasha meheraddu ka yiraahdaan helitaanka caawimaadda warbaahinta bulshada?
Kireyso qof inuu dejiyo xisaabaadka oo ku baro sida ugu habboon ee loo maareeyo. Way adagtahay in lala socdo dhammaantood qaab waqtiyaysan.
Hayso aqoonsi samee warbaahintaada Bulshada. Waxaad shaqaaleyneysaa CPA maxaa yeelay ma sameyn kartid xisaabinta, waxaad kireysan kartaa xirfadle baraha bulshada.
Maalmahan qof walbaa waa "khabiir baraha bulshada" waxaad u taqaannaa inta ay iyagu og yihiin.
Kireyso qof wax ku bari kara, hel qalabka warbaahinta bulshada kor u kaca oo socodsiiya taas oo ku habboon astaantaada.
Soo dhaweyso baraha bulshada laakiin noqo mid ka caroodo warbaahinta bulshada "khubaro" iyo la taliyayaal.
Ma jeclaan lahayd nuqul ka mid ah natiijooyinka sahaminta oo dhammaystiran? Waxaad kala soo bixi kartaa Roundpeg, oo ah shirkad ku taal Indianapolis warbaahinta bulshada.
Naqshadeeyayaasha Websaydhka iyo Soosaarayaasha Webka
40 Qalab, 40 Slides, 40 Daqiiqo